Oromaddi loo caal waayay oo uu ka dhex qarxay dagaal yeeshay waji Kristan iyo muslim. – Xeernews24
Oromaddi loo caal waayay oo uu ka dhex qarxay dagaal yeeshay waji Kristan iyo muslim.
5. Januar 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Gobolada Galbeedka dhulka Oromia waxaa mudo Laba Todobaad ah kasocda dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada milateriga Itoobiya iyo ciidanka Jabhadda Oromadda ee OLF.
Dagaalkan oo maamulka Oromadu uu kudhawaaqay xukuumadda dhexe ee Addis ababana ku Taageertay ayaa noqon waayay siddii ay kuwadeen, waxayna Jabhadda OLF Heshay Taageero lama Filaana oo waxgaradka, culimada, dhalinyarada, iyo Qaybaha bulshadu ku Garab istaageen.
Dagaalkan ay si fudud u Qaadeen maamulada kala sareeya ee ururka ODP-da ayaa Waji cusub oo lama filaan ah Yeeshay waxayna dadka Oromadda ahi oo u badan muslim, dareemeen in Ururka OLF dagaalka lagu Qaaday Yahay mid salka kuhaya Nacayb diimeed maadaama ODP-da madaxdeeda iyo Taageerayaashedu Kristan yihiin.
Arinta uga sii dartay xaalada ayaa ah in saraakiil sare oo katirsanaa ciidamada Liyuu Haylka Oromadda iyo kuwa milateriga ee kasoo Jeeday Oromadda muslimka ah, ay ku biiraan Jabhada OLF kadib markii ay u arkeen dagaalka lagu Qaaday OLF inuu yahay mid salka kuhaya Takoorka Oromadda muslimka ah iyo madaxdooda.
War saxaafadeed shalay uun kasoo baxay maamulka Oromada ayay kusheegeen in Jabhada OLF ay Gabi ahaan burisay Heshiiskii Nabadeed ee kala dhexeeyay dawlada Itoobiya, sidaa darteedna waxaa shacabka loogu Hanjabay in cid kaste oo Taageerta ay ciqaab adag mudan doonto.
Jabhada ayaa haatan maamusha inta badan Gobolada Gujji, Wollega, Arsi, Borana, iyo deegaama kale waxaana Hanjabaada cusub ee maamulka Oromadu Dab kusii Hurisay xaaladii cakirayd ee kajirtay Goboladaasi oo waxgaradkoodu ku dhawaaqeen inay is difaacayaan.
Dhinaca kale baraha bulshada ayaa waxaa kasocda Olole balaadhan oo ay wadaan Oromadda muslimka ah oo u muuqda kuwa Haatan ku baraarugay xaqiiqda dagaalka lagu Qaaday Jabhada OLF, waxayna ugu baaqayaan dadka Oromadda ah ee muslimka ah inay iska difaacaan weerarada kaga imaanaya maamulka Takoorka iyo bahdilka kuhaya ee OPD-da.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/01/OromoMinnesota640.jpg 447 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-01-05 10:59:392019-01-05 10:59:39Oromaddi loo caal waayay oo uu ka dhex qarxay dagaal yeeshay waji Kristan iyo muslim.
Goobihi ay daldashay maamulka Hargeysa ayaa laga cabsi qaba in u ka curto dagaal... Shiinaha Oo Soomaalia Ka Difaacay UK Iyo Go’aan Xasaasi Ah Oo Maanta Laga...